Myanmar IT Resource Forum » Garbage » hacking topic
1 hacking topic on 24th October 2009, 11:26 am
ဟက်ကင်းနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး topic အောက်မှာ ရှုပ်နေလို့
hacking knowledge အစား hacking zone လို့ ပြောင်းသင့်တယ်ထင်တယ်
- Hacking articles and news ( ဟက်ကင်းနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် သတင်းများ )
- white paper and hacking tutorial
- hacking tool ( must responsibility whatever u post about tools )
- hacking library (shell,script, code,hacking vedio and hacking ebook )
- exploits and vulnerabilities
- General hacking, (topic ရှာတွေ့သော hacking နဲ့ပါတ်သတ်သည့် အကြောင်း အရာများရေးရန် )
- vip hacking section
2 Re: hacking topic on 24th October 2009, 3:53 pm
အင်း ကိုနေဇော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ကြမယ်လေ။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုလုပ်လိုက်တာနဲ့ လိုအပ်တာတွေ တင်ပေးဖို့ကြတော့ နည်းနည်းခက်မယ်ထင်တာပဲ။
Off Topic ကြီးလိုဖြစ်နေမှာဆိုးလို့ပါ။
ကိုနေဇော်လုပ်ချင်လုပ်ထားလိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် permission ကို admin တွေပဲပေးထားအုံးဗျ။ လောလောဆယ်တော့ ။ အိုင်ကွန်တွေထည့်ရအုံးမှာမို့လို့ပါ။
3 Re: hacking topic on 24th October 2009, 5:00 pm
/-\_††@Cl<3r wrote: အင်း ကိုနေဇော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ကြမယ်လေ။
0ff-topic က it ဖိုရမ်ကြီးထည်းမှာဆိုတော့ နည်းနည်း အထီး ကျန်နေတာပါ ။
hacking knowledge ပိုင်းက စည်းကမ်းသိပ်မရှိသလိုကြီးဖြစ်နေလို့ ။
လိုအပ်တာတွေကလည်း အဲ့လောက်တော့ မခက်ပါဘူး ။ ။
it ဖိုရမ် တခု အနေနဲ့ သေသေချာချာရပ်တည်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင် hacking ပိုင်းကိုသေချာလုပ်စေချင်တယ် ။
ခုတော့ခနထားရင်ထားလိုက်အုန်းလေ ။ icon ready မှ တခါထည်းပြောင်းကြတာပေါ့ ။ ကျနော် အနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ data တွေ အရင်စုထားအုန်းမယ် ။
4 Re: hacking topic on 24th October 2009, 5:03 pm
အဲဒီ့လိုအပြင် အစ်ကို category တွေကိုခွဲထားလိုက်ပါလား။ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ ပေါ့။
အဲဒီလိုမှ ကျနော်တို့လည်း ပြောင်းသင့်တာတွေကိုပြောင်းပြီး လိုတဲ့ဒေတာတွေကို စုကြတာပေါ့။
နောက် ဆိုက်ကိုလာရင်လည်း သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ဆက်လုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ.
5 Re: hacking topic on 26th October 2009, 3:59 pm
/-\_††@Cl<3r wrote: အဲဒီ့လိုအပြင် အစ်ကို category တွေကိုခွဲထားလိုက်ပါလား။ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ ပေါ့။
data အများစုကို create လုပ်သင့်တယ် ။ စုတာမကောင်းဘူး ။ ဆိုဒ် reputation ကျမှာဆိုးလို့ ပါ ။
အရင်တုန်းက security risk ဖြစ်နေတဲ့ဆိုဒ်တွေ ။ ကိုယ်တိုင် deface လုပ်ထားတဲ့ tuto vedio တွေစုထားတယ် ။ ကျနော် harddisk ပျက်သွားလို့ ကျနော်ရှာထားသမျှတော့ကုန်သွားပါပြီ ။
ခု ကျနော်နည်းနည်းပြန်အားလာပါပြီ ။ အစကနေပြန် လုပ်ပြီး ပြန်တင်ကြတာပေါ့ ။
တတ်နိုင်သလောက် လုပ်သွားပေးပါမယ် ။
6 Re: hacking topic on 26th October 2009, 5:17 pm
ခုကျနော်လိုအပ်သလောက်ခွဲထားပြီးပါပြီ ။ permition တွေပြန်စစ်ပေးပါအုန်း နော် ။ လောလော လောနဲ့ မလို့ ။ လိုအပ်တာတွေကိုဒီ အပါတ်အတွင်း စတင်သွားပေးမှာပါ ။
7 Re: hacking topic on 27th October 2009, 7:20 am
ဟုတ်ကဲ့ပါအစ်ကို။ Data တွေကို စုတာထက် Create လုပ်သင့်တာမှန်တော့မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့မှာ Hacking နဲ့ ပတ်သက်လို့ Create လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသေးလို့ပါ။ ကျနော် Cracking နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ တတ်နိုင်သလောက် Create လုပ်ပါတယ်။ အစ်ကို့ကိုတော့ Hacking ပိုင်းမှာ အားကိုးပါရစေ။
ခုကျနော်လိုအပ်သလောက်ခွဲထားပြီးပါပြီ ။ permition တွေပြန်စစ်ပေးပါအုန်း နော် ။ လောလော လောနဲ့ မလို့ ။ [You must be registered and logged in to see this image.] လိုအပ်တာတွေကိုဒီ အပါတ်အတွင်း စတင်သွားပေးမှာပါ ။
Permission တွေ ကျနော် ပြန်စစ်လိုက်ပါမယ်။
8 Re: hacking topic on 27th October 2009, 12:24 pm
မလာဖြစ်ဘူးလို့ ထင်ပေမယ့် မရရအောင်လာပြီး လုပ်သွားပါတယ်။
အခု hacking zone ဆိုပြီး သပ်သပ်ထပ်လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။
တကယ်လို အဆင်ပြေပြီဆိုတာနဲ့ ဖိုရမ်ထဲက ဟက်ကင်းတွေအားလုံးကို ပိတ်ပြီး နေရာပြောင်းပါမယ်။
နောက် တင်စရာရှိတာကို တင် ပြင်ဆင်စရာရှိတာကို ပြင်ဆင်ပြီး တစ်ပါတ်လောက်ကြာမှ ပြန်ဖွင့်မယ်လို့ လည်းစိတ်ကူးထားတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေရော ဘယ်လိုသဘောရှိလဲမသိဘူး
9 Re: hacking topic on 28th October 2009, 5:51 pm
ကိုနေဇော် ရေ အစ်ကို ခွဲချင်တဲ့ အတိုင်းခွဲပေးထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အောက်က မြန်မာလိုမှာ ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ အစ်ကိုနဲနဲပြောပြပါဦး။
exploits and vulnerabilities ဆို ဘာနဲ့ဆိုင်တာရေးရန် ဆိုပြီးတော့လေ။ အဲလိုလေး နည်းနည်း လမ်းကြောင်းပေးပါဦး။
10 Re: hacking topic